Inqubomgomo Yobumfihlo - Alietc.com
Imininingwane yenqubomgomo ekulo mbhalo iphathelene nanoma imiphi imininingwane osinikeza yona, eyomuntu siqu neyebhizinisi, nolwazi esiluqoqa ngokuzenzakalelayo noma oluvela kwabanye abantu.
Yonke imininingwane yenqubomgomo yobumfihlo ihambisana nomthetho wamazwe omhlaba, futhi ingaphansi koshintsho nezichibiyelo njengoba kudingeka. Ngokusebenzisa isiza sethu futhi uvume imigomo nemibandela yethu, ubhalisa futhi uvumelana nale nqubomgomo yokugcina imininingwane, yokwabelana nokuvikela njengoba kusebenza ngaphansi kwe- ALIETC.com.
Ukwehluleka ukuvuma noma ukulandela izinqubomgomo ezikule dokhumenti kuzoholela ekuxhumeni ngokushesha kwensiza, noma imikhawulo ku-akhawunti yakho. Uma unemibuzo mayelana nesitatimende senqubomgomo yethu noma imigomo nemibandela, sicela uxhumane nomenzeli wesevisi yamakhasimende.
Uzocelwa ukuthi unikeze imininingwane yokuxhumana edingekayo ukwenza ukuhweba kwebhizinisi esizeni sethu. Ukubhalisa endaweni yethu yesikhulumi kudinga ukudalulwa kwegama lakho, ikheli, inombolo yocingo, isihloko somsebenzi kanye nomnyango (uma kusebenza).
Uzocelwa ukuthi unikeze imininingwane kamazisi nanoma yini ephathelene nohlobo lwebhizinisi lakho, njengegama lenkampani, uhlobo lwebhizinisi nelayisense lokuhweba.
Ukudalula nokwabelana ngolwazi
Singadalula noma imiphi imininingwane eqoqiwe futhi egcinwe kubamukeli abalandelayo:
Amalungu e-ALIETC Group nababambisene nabo kanye / noma abahlinzeki ngemisebenzi abaqokiwe abasebenza ngokubambisana nathi ukuletha izimpahla nezinsizakalo.
Ozakwethu bebhizinisi - ukubenza bakwazi ukukuthumela izaphulelo nokunikelwayo
Abahlinzeka ngezinsizakalo zokukhokha ukuze bacubungule okwenziwayo futhi baxazulule futhi baqinisekise ama-akhawunti.
Abamele izinsizakalo zamakhasimende, ukubenza bakwazi ukunikela ngezinsizakalo nosizo olubalulekile lwangemva kokunakekelwa.
Abahlinzeki bokulawula ubungozi, ukuze bahlole ukuphepha kwama-akhawunti womsebenzisi nokuthengiselana.
Abaphathi bezomthetho, abeluleki abaqeqeshiwe, izinhlaka zikahulumeni, abemishwalense kanye nezinye izinhlaka ezilawulayo ngokuhambisana nemithetho esebenzayo futhi basebenzise, ​​basungule futhi bavikele amalungelo ethu asemthethweni futhi bavikele izintshisekelo zakho ezibalulekile nezabanye abantu.
I-cookie iyingxenye encane yedatha egcinwe kwi-hard drive yekhompyutha yakho ngesiphequluli sakho sewebhu. Amakhukhi asetha i-ALIETC.com yami iyadingeka ukuze asebenze kahle iwebhusayithi ngokulandela ngomkhondo umsebenzi wakho wesayithi nangokuncoma izimpahla nezinsizakalo. Amakhukhi weseshini ayasuswa uma uvala isiphequluli futhi amakhukhi aphikelelayo asetshenziselwa ukukuqinisekisa. I-ALIETC isebenzisa amakhukhi weseshini namakhukhi aphikelelayo.
Sigcina imininingwane yakho neyebhizinisi inqobo nje uma sigcina ubudlelwane obusemthethweni bebhizinisi. Siyacelwa ukuba senze njalo ukuletha izimpahla nezinsizakalo njengoba kuthenjisiwe kwisimemezelo sethu.
Uma uthatha isinqumo sokuphetha ibhizinisi lakho nge-ALIETC.com futhi uvale i-akhawunti yakho, yonke imininingwane ehlobene yomuntu siqu neyenkampani izosuswa. I-ALIETC.com izosusa noma ibize imininingwane kuye ngokuthi i-akhawunti yakho isuswe unomphela noma imisiwe (egameni lekhasimende le-ALIETC.com).
Uma nganoma yisiphi isizathu imininingwane yakho noma yenkampani ingeke isuswe ngokushesha (ezimweni lapho ulwazi lugcinwe khona kungobo yomlando yokulondolozwa) imininingwane eqondiswayo izokwehlukaniswa kusetshenziswwe kuze kube yilapho sekutholakele imininingwane ephelele.